Isivakashi Projects | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
Le yindawo lapho ungafaka khona izithombe bese ushiya imibono isitshela ngamaphrojekthi wakho. Amaphrojekthi amadala avela kusayithi lakudala yiwo lapha.
Kuthunyelwe ngu- Andypontinen Ngo-Wed, 09 / 06 / 2017 - 04: 56
I-Evinrude 3hp 3303S inkinga yesikhathi eside
Ngine-'63 Evinrude 3hp, inguqulo ye-longshaft. Ngikwenzele lokho ngokuphelele eminyakeni emibili eyedlule, kepha angizange ngilivule ikhanda lamandla (ohlangothini lwe-crankshaft) kuleli hlobo lapho ngangihamba ngesikebhe, into ethile yaphuka ngokuzumayo phakathi kwe-drivehaft ne-crankshaft. I-Crankshaft ayibange isashintsha i-driveshaft (ne-propeller). Ingxenye engezansi yemoto ilungile. Lapho ngithatha ama-plugs okushisa futhi ngiphendula i-flywheel, ngabona ukuthi ihambisa womabili amapistoni ngamasilinda ngendlela efanele. Kungenzeka yini ukuthi ukuxhumana kwe-crankshaft ku-driveshaft kuphukile ngandlela thile? Inhloko ephezulu yeDriveshaft (eya enhlokweni yamandla) iyinqaba -fourquare, ihluke ngokuphelele kune-'65 Johnson 3 hp yami, enekhanda elijwayelekile le-boron (elifana nezinkanyezi) ku-drivehaft yayo.
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 09 / 14 / 2017 - 11: 49
Ekuphenduleni I-Evinrude 3hp 3303S inkinga yesikhathi eside by Andypontinen
Ngingazama ukuthatha ...
Ngingazama ukususa iyunithi engezansi bese ngiqala imoto ukubona ukuthi izosebenza yini. Uma kungenankinga ngekhanda lamandla, ungadinga ukudlula ku-gearcase. Ubukeka kanjani uwoyela wamagiya aphansi? Kungenzeka ukuthi izimvu zamanzi zihambe kabi bese uthola amanzi ngamagiya akho angawavalela ngemuva kokuhlala isikhashana. Ungahle uthande ukuthenga i-eBay ukuze ubone ukuthi ungathola yini izingxenye ezinhle zemoto noma okungenani eyodwa enento enhle ephansi ongayithenga. Izingxenye zokushintsha ziyatholakala, kepha ungazithola ngokushesha usebenzisa imali engaphezu kwalokho okufanele ukwenze. Okokuqala zama ukuhlukanisa konke bese uhlanza yonke into uphinde uhlanganise nezimpawu ezintsha.
Kuthunyelwe ngu- i-ricklummer Ngo-Tue, 04 / 24 / 2018 - 09: 07
Awukho lapho u-shearpin onalo
Kuthunyelwe ngu- gameroomfan Ku-Sun, 09 / 10 / 2017 - 13: 31
I-Evinrude 25 hp I-Big Twin (I-Model 25018) Akukho Qala / Ukuvuza I-Carb
Okokuqala, ake ngiqale ngokukubonga ngokuqala nokulondoloza lewebhu enkulu!
Ngisanda kuthola injini engenhla. Kuthiwa ibisebenza kahle ekugcineni kwayo.
Kodwa-ke, ngemuva kokuzama ukukuqala kungaphumeleli, nokwenza ukuhlolwa okuthile, nginokungabaza kwami. Lokho kushiwo, ngibheke inhlansi ngakuqinisekisa lokho. Kodwa-ke, ngiqaphele uphethiloli ohamba ngamandla we-carb ovela ekuxhumekeni kwenaliti okupakisha inaliti. Futhi, uphethiloli omningi endaweni yomphimbo we-carb.
Ngiqaqa i-carb, ngathola ukuthi izilungiselelo ze-float bezicishiwe. I-float yisikhokho esidala sesitayela. Ngicabanga ukuthi okungenani enye inkinga yami yokuqala ayibangelwa yizikhukhula ngenxa yokuthi i-valve enkulu ye-float ayivali kahle, kungaba ngenxa yesihlalo esibi / esingcolile, kanye / noma izilungiselelo ze-float ezingafanele.
Ngakho-ke, ngiyalele ikhithi ye-carb neflat entsha. Nayi imibuzo yami:
1) Ulwazi oluhle engingaluthola kuzilungiselelo ze-float bekungukuthi: lungadluli i-1/32 "kusuka ezingeni elinomphetho ophezulu womzimba we-carb. Kanye nokwehla kwe-1 1/4" kwe-float. Ngabe lokhu kulungile?
2) Angikatholi okuningi ekupakisheni inaliti. Kungenzeka ukuthi ukupakisha kube kubi, ngaleyo ndlela kube nomthelela ku-carb evuzayo? Yini ukulungiswa kokupakisha okusha noma kwe-replcement?
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 09 / 14 / 2017 - 11: 55
Ekuphenduleni I-Evinrude 25 hp I-Big Twin (I-Model 25018) Akukho Qala / Ukuvuza I-Carb by gameroomfan
Ngihlala nje nje ngepulazi ...
Ngihlala nje ngiflaya nje ngakho-ke liyizinga. Ezingeni, inaliti kufanele ivale ukuphuma kukaphethiloli esitsheni. Angikali lutho.
Ikhithi entsha ye-carb izobandakanya ukupakisha inaliti okufanele ifakwe. I-carb yakho akufanele i-leek lapho iqedile okungaba yingozi yokuphepha.
Kuthunyelwe ngu- gameroomfan ku Fri, 09 / 15 / 2017 - 16: 03
Ekuphenduleni Ngihlala nje nje ngepulazi ... by ttravis
ok, ngiyabonga ngempendulo ...
kulungile, ngiyabonga ngempendulo. Amakhithi e-carb ebengiwabhekile awazange afake ukupakisha okushintshwayo.
Ngicabanga ukuthi ngisesendleleni efanele kuze kube yilapho inkinga 'engekho isiqalo' ibhekene nayo.
Kuthunyelwe ngu- ttravis ku Fri, 09 / 15 / 2017 - 23: 57
Ekuphenduleni ok, ngiyabonga ngempendulo ... by gameroomfan
Nansi okunye okuthunyelwe ...
Nansi ukupakisha okunye okufaka esikhundleni: https://www.amazon.com/s/ref=as_at?imprToken=SkxdL8dTeRyLD5isJEtUSQ&slo…
Kuthunyelwe ngu- Mike L Ngo-Sat, 04 / 21 / 2018 - 19: 56
Ukuzama isandla sami ekubuyiseni i-lightwin kamkhulu wami, kubukeka sengathi kungama-54 avela kumbala. Isikhathi sokuqala kulokhu. U-ode zonke izingxenye ozincomele ukushuna (ukwakhiwa kabusha kwe-carb, plugs, amaphuzu, condenser, coils, impeller. Ngicabanga ukuthi nami ngidinga ukufaka ezinye zezimpawu zamayunithi aphansi, ngoba injini ayikasebenzi eminyakeni engama-25 noma ngaphezulu. ikhithi efaka izimvu zamanzi engizidingayo. Noma iziphi iziphakamiso ngokuqondene nekhithi noma ukuthi iyiphi indawo engcono yokuyithola? Futhi uhlela ngentambo yokuqala kanye nentwasahlobo.
Kuthunyelwe ngu- I-Starfish229 Ku-Mon, 08 / 27 / 2018 - 12: 57
Ezemidlalo Scott Scott 1962 ngeke iqale
Ngisanda kuthola isikebhe somndeni esingazange sibe seminyaka ye-25 iminyaka engiyiqale ngayo uma ngithatha manje kodwa ngeke iguqulwe. Kuzoqala ngokusebenzisa ukuqala kwamanzi kodwa imoto ngeke iqhubeke isebenza.
Ngithengile incwadi ye-1962 Scott's motor futhi ngidinga iseluleko esithile okufanele ngiyenze ngokulandelayo.
Ngishintsha ama-sparks ama-plugs anebhethri elisha nginenkinga kulokho okufanele ngizame ngokulandelayo.
noma yisiphi iseluleko noma kufanele ngiyifake endaweni yokucubungula?
Umfula uRunt udinga i-TLC
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Sun, 10 / 28 / 2018 - 22: 48
5.5 HP Johnson 1960 Model CD-17 Project eyenziwe nguBosse "Bo" Petersson
Uvele wengeze / wangeniswa kusuka ku-facebook site kuya ku-PROJECTS Imenyu.
I-5.5 HP Johnson 1960 I-Model CD-17 Project ngu Bosse "Bo" Petersson - Stockholm, eSweden
Kuthunyelwe ngu- umphathi wemikhumbi350 Ngo-Wed, 01 / 23 / 2019 - 10: 36
hey wonke umuntu wayefuna ukubuza wonke umuntu mayelana nemisebenzi yakho ku-2019 nokuthi babonga kanjani wonke umuntu omusha onyaka omusha
Kuthunyelwe ngu- Lewis Walling NgoThu, 03 / 14 / 2019 - 18: 03
Ukuguqulwa kwesistimu yokubhebhetheka kabili emgwaqweni ohlelweni olulodwa lomugqa
Ngine-10 hp 1957 Johnson Seahorse ene-fuel line eyodwa. Ngifuna ukuyiguqulela kusistimu yomugqa owodwa. Iziphi izingxenye engizidingayo ngaphandle kwepompo kaphethiloli? Uma ngidinga i-carburetor, sithini isibizo salesi sigaba?
Kuthunyelwe ngu- Abangaziwa (abangaqinisekisiwe) Ku-Sun, 03 / 22 / 2020 - 18: 42
Ukuguqulwa Kwempompo Kaphethiloli - Iphampu Ayisebenzi?
Ukuhlunga kwe-Fuel kudonsa futhi ngokusobala akugcwalisi.
Okokuqala, ngiyabonga ngalesi sithangami! Lo ngumzamo wami wokuqala wokwakha kabusha i-outboard futhi leli khasi libe yinsiza emangalisayo. Le yiJohnson CD-14 yami, njengaleyo eningiliziwe kuphrojekthi yakho, futhi ngisebenzise zonke izithombe nemiyalo oyithumele. Kusemqoka kakhulu.
Ngaguquka ngisuka ethangini lokucindezela elivuthayo ngaya ethangini lesimanje elilodwa, ngazakhela obakaki bephampu likaphethiloli ngaphezu kwe-carb futhi ngakwazi ukuhambisa yonke imigqa kagesi ngakho konke kuvumelana ngokuqinile futhi ngikwazi ukubuyisa i-cowling emuva.
Ngisanda kuqala nje ukuqala, futhi iyasebenza, kepha isihlungi sikaphethiloli engisifakile kulayini kaphethiloli ongenayo phakathi kwethangi likaphethiloli nepompo kaphethiloli siyakhipha futhi asigcwaliswa yipompo ngenkathi imoto isebenza. Ngipompa imigqa nebhalbhu ethangini bese ngibona ukugcwaliswa kwesihlungi, kanye nesihlungi sesitsha sengilazi ku-carb. Lapho imoto isebenza, isihlungi kulayini kaphethiloli sisuka sigcwele siye kokungenalutho. Angikwazi ukusho ukuthi ipompo kaphethiloli ihlinzeka ngophethiloli noma iyinto encane nje, kepha kubonakala ngathi ayisebenzi.
Ukuphela kwento engingayicabanga ukuthi ngigcwalise kuphela ithangi likaphethiloli eli-3 ngelitha elilodwa likaphethiloli kulokhu kuhlolwa, futhi mhlawumbe "iveni" yethangi ayicwilisiwe ngokwanele, kepha bengifuna ukubona ukuthi ngabe kukhona yini onemicabango . Ngingahle ngihlanganise ilitha eligcwele likaphethiloli ngesonto elizayo noma ngiphinde ngizame futhi.
Ngiyabonga futhi nonke. Ngikujabulele kakhulu ukuhlola leli khasi lewebhu nesithangami.
UJake B, e-Illinois
Kuthunyelwe ngu- Abangaziwa (abangaqinisekisiwe) Ku-Sun, 03 / 22 / 2020 - 18: 56
Ekuphenduleni Ukuguqulwa Kwempompo Kaphethiloli - Iphampu Ayisebenzi? by Abangaziwa (abangaqinisekisiwe)
"Ukuguqulwa" okuningi kokungena
Le yindlela engaguqula ngayo ukuphindaphindeka kokudla ukuze kudale ukushaya kwepompo kaphethiloli. Ucezu oluncane lwe-aluminium engilunqume ngesaha lokugenca nobunjwa ngefayela. Inesiqeshana sebhasikidi esidala esiyinqwaba ngemuva kwaso ukudala uphawu (ngabuyisela wonke ama-gaskets lapho ngakha kabusha lokhu).
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Mon, 03 / 23 / 2020 - 19: 11
Iqiniso lokuthi ungakwazi ukudonsa…
Iqiniso lokuthi uyakwazi ukupompa isibani bese uthola uphethiloli kungenza ngicabange ukuthi ithangi lakho lilungile. Ngingaphakamisa izinto ezimbili:
Okokuqala, ngizohlola ukuthi ungayizwa yini ingcindezi enhle yokushayela kulayini wakho.
Okwesibili, bengizosusa okokuhlunga kaphethiloli kusuka ku-equation kuze kube yilapho uthola izinto zisebenza bese ngifaka futhi.
Lokho kuyizithombe ezinhle futhi konke kubukeka kulungile. Lapho usunezinto ezisebenzayo, ngithanda ukufaka imibono yakho ekhasini langempela. Ngigcine ngithunyelwe.
Kuthunyelwe ngu- Abangaziwa (abangaqinisekisiwe) Ku-Sun, 03 / 22 / 2020 - 19: 02
Okokhelekayo Pump Ukukhweza Ubakaki
Umuzi wami wenza ukukhuphuka kwepompo.
Le yipompo kaphethiloli engiyisebenzisayo, kanye nesithombe sebakaki engisenze eshidini le-stock aluminium. Igibela emotweni isebenzisa izikulufu ezimbili ezibamba umhlangano wokuqalisa kabusha. Bekufanele ngenze obakaki abambalwa ngaphambi kokuba ngikwazi ukuthola umumo nesimo esivumela yonke imigqa kaphethiloli nepompo ukuthi ilingane ngaphansi kwenkomo, kodwa konke kuyalingana nesivalo siqhubeka futhi kubukeka kufanele.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Mon, 03 / 23 / 2020 - 19: 03
Ekuphenduleni Okokhelekayo Pump Ukukhweza Ubakaki by Abangaziwa (abangaqinisekisiwe)
Kubukeka kukuhle. Kuhle kakhulu…
Kubukeka kukuhle. Kumnandi kakhulu kunokwami!
Kuthunyelwe ngu- Abangaziwa (abangaqinisekisiwe) Ku-Mon, 03 / 30 / 2020 - 14: 25
Ngisebenza ku-jw-11 3hp…
Ngisebenza kuJw-11 3hp Johnson ngabe kukhona umuntu onomdwebo wezinhlaka ekuqaleni? Ngiyabonga kusengaphambili!
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Tue, 03 / 31 / 2020 - 11: 45
Ekuphenduleni Ngisebenza ku-jw-11 3hp… by Abangaziwa (abangaqinisekisiwe)
Nansi a izingxenye zemanuwali. Nalu uhlu lwezingxenye ezitholakalayo ze- I-Jw-11.
Ungafuna futhi ukubheka i-3 HP yami Iphrojekthi yeTune-Up.
Kuthunyelwe ngu- Amabhishi ku Fri, 04 / 24 / 2020 - 16: 49
I-lightwin balky throttle
'66 Lightwin uzoqala nje futhi agijime. Kepha ukuhambisa injini phezulu / phansi kubulala injini ngaphandle kokuthi kulungiswe kancane. Ama-plugs amasha nokwakhiwa kabusha kwe-carb. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe yikho okugoqayo / ukuhanjiswa? Noma yisiphi iseluleko?
Kuthunyelwe ngu- IStroman63 Ngo-Sat, 04 / 25 / 2020 - 14: 54
Ukubingelela okuvela eVancouver British Columbia. Ngingaqala ukuqala ngokukubonga ngokuhlanganisa isiza esinjengalesi ndawonye. Ngaphandle kwezincazelo zakho nezithombe zakho bengingeke ngikwazi ukuthatha iphrojekthi yami yokuqala, lokho kwakungobaba bami 1958 Evinrude 3 hp. Bekuhleli endaweni yokugcina iminyaka engama-55, kepha ngesayithi lakho kuyasebenza futhi. Ngikujabulele ukukwenza kakhulu kangangokuba ngithole isiphazamisi futhi manje angikwazi ukuyeka ukuthola ngaphezulu kwesitayela / umbala wakudala wama-1950 wokulungisa. Ukwaneliseka kokuba iphinde isebenze kanye nengxoxo ekwethulweni kwesikebhe nabantu kwenza yonke inqubo ibe mnandi. Ngosizo lwakho wonke ama-motors asesithombeni angabagijimi abakhulu futhi.
Ngo-1957 iViking 5 hp.
1955 uJohnson 5.5 hp.
Ngo-1958 u-Evinrude 3 hp.
Kuthunyelwe ngu- lwanga224 Ngo-Tue, 06 / 30 / 2020 - 20: 16
1966 3 hp Evinrude - ukuthatha i-caburetor
Ngingu-novice ngazo zonke izinjini, ikakhulukazi izinjini ezingaphandle. Ngine-Evinrude yango-1966 3hp, imodeli # 3602. Imoto yami igijima cishe imizuzwana eyi-10 futhi yilokho kuphela. Iqala kabusha kahle kepha isebenza amasekhondi ayi-10 kuphela akunandaba ukuthi izilungiselelo zokuminyanisa noma zokuphutha. Ngifundile ukuthi ukuphuma kwethangi likaphethiloli kungadala lokhu uma kungavuleki lapho kusebenza. Mhlawumbe leyo inkinga yami. I-timer yakudala yasendaweni yinye kuphela ezosebenza kuyo futhi isalele emuva ngamaviki ama-4-5. Ululeke ngokuthi ngithathe i-carburetor ngiyilethe ukuze ngonge isikhathi nemali azoyipheka. Ngisuse ikhava yenjini futhi ngabheka ngaphezulu kwe-carburetor futhi kubukeka kuyinselelo encane kimi ukuyikhumula bese kuba nenselelo enkulu yokubuyisela emuva kahle. Noma yisiphi iseluleko onganginika sona singabongwa kufaka phakathi ividiyo yokwenza lokhu noma ibhukwana lokulungisa?